जुआनिटाको क्रेओल सोल क्याफे: डचटाउन व्यापार शोकेस - डचटाउनएसटीएल.org
शेफ कर्टिस खानपान व्यवसाय मा शुरू भयो। २०२० को गर्मीमा उनी भित्र गए शहरी Eats छिमेकी फूड हल जुआनिटा खोल्न र आफ्नो पाजी कौशल प्रदर्शन गर्न जुन उनको हजुरआमा (उपनाम जुआनिटा) र न्यू ओर्लिन्सको क्रियोल खानाबाट प्रभावित थिए। उसको डाउनटाउन डचटाउन स्थानको सफलताले उनलाई उत्तर सेन्ट लुइसमा दोस्रो स्थान खोल्नको लागि नेतृत्व गरेको छ, जनवरी 9th देखि १ 1823२। नर्थ टेलर एभिन्यूमा।
जुआनिता आइतवार, बिहान ११: am० देखि साँझ through सम्म खुल्ला छ। COVID-11 को कारणले गर्दा, नेबरहुड फूड हल हाल टेकआउट मात्र छ (फुटपाथ सिटको साथ तातो दिनमा उपलब्ध छ)। तपाईं जुआनिटा मार्फत पनि डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ GrubHub, दरवाजा ड्यास, र पोस्टमेट्स.
विशेष गरी हालको महामारीको समयमा, डचटाउन व्यवसायहरूलाई तपाईंको समर्थन आवश्यक पर्दछ। रेस्टुरेन्ट विशेष गरी वर्षको सुरुको, चिसो महीनामा संघर्ष गर्दछ। तर तपाईं केवल खाने को आदेश द्वारा हाम्रो छिमेकी बलियो र जीवन्त राख्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ! जुआनिटाको क्रियोल सोल वा हाम्रो अन्य कुनै पनि अद्भुतबाट टेकआउट वा डेलिभरी अर्डर गर्नुहोस् डचटाउन रेस्टुरेन्ट तपाईंको अर्को खानाको लागि। केही रेस्टुरेन्टहरूले सीमित भोजन-भित्र सेवा पनि प्रदान गर्दै छन्।
DT2 र डचटाउनस्टा.लि..org हाम्रो छिमेकी व्यवसायहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन संसाधनहरू विकास गर्दैछ। यदि तपाईं नयाँ वा स्थापित व्यापार मालिक हुनुहुन्छ भने, भ्रमण गर्नुहोस् dutchtownstl.org/ व्यवसाय हामीले के प्रस्ताव गर्नुपर्दछ भनेर हेर्न। र यदि तपाईं आफ्नो व्यवसाय डचटाउन व्यापार शोकेसमा चित्रित गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोस्.
यो डचटाउन व्यापार शोकेस भिडियो चिप स्मिथ अफ द्वारा चित्रित र उत्पादन गरिएको थियो क्रस ग्रान्ड, डाउनटाउन डचटाउनमा अवस्थित। सदस्यता लिनुहोस् DutchtownSTL YouTube च्यानल अर्को डचटाउन व्यापार शोकेस छिट्टै आउँदैछ!
तल दायर गरिएको डचटाउन व्यापार शोकेस. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. कारोबार, DT2, डचटाउन, डचटाउन व्यापार शोकेस, र डचटाउन सीआईडी. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो जनवरी 6th, 2021 .
DutchtownSTL.org डचटाउन व्यापार शोकेस डचटाउन व्यापार शोकेस: जुआनिटाको क्रियोल सोल